Codadka dilayaashi Jamal Khashoggi iyo wada sheekaysigoodii oo la soo bandhigay (dhegayso | daawo) – Radio Daljir
Codadka dilayaashi Jamal Khashoggi iyo wada sheekaysigoodii oo la soo bandhigay (dhegayso | daawo)
Juunyo 23, 2019 9:04 b 0
Danbi-baarayaasha Qaramada Midoobey ee ciddii ka danbeysay dilkii Jamal Khashoggi ayaa soo badhigay xaqiiqooyin iyo caddaymo muujinaya in Amiir Maxamed bin Salmaan, dhaxalsugaha Boqortooyada Sucuudiga, uu amray dilkii Khashoggi
Sidee bay ku bilaabeen sheekada dilka Khashoggi?
Dabaqa labaad ee Qunsuliyadda Sucuudiga ee magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga waxaa isugu yimid rag aad u kala duwan, dhinac kasta. Mid wuxuu ahaa dhakhtar ku takhasusey raadreebka falalka dambiyada culus; mid wuxuu ahaa sirdoon; kuwo kale ciidamada ammaanka, dhammaantoodna waxa ay ka hawlgali jireen xafiiska Amiir Maxamed bin Salmaan.
Waxay ay ka sheekaysteen goorta la filayo in uu yimaado ninka la sugayo, sida ay u dili doonaan, iyo sida ay jirkiisa qunsuliyadda uga saari doonaan.
Ayaga oo welwel ka qaba sida nin intaas le’eg asaga oo meyd ah meesha looga saari karo, baa waxaa soo booday datoorka, asaga oo yiri, “dhib ma leh meel kasta oo lafuhu iska galaan waa wada carjoow, marka waa la kala goynayaa. Dhibi ma jirto.” Markaas bay yara dabceen oo waxaad moodday in sharqan la’aanta la dareemay ay kalsooni dheeraad ah ragga siisey.
Haddana Datoorka oo hadalka ku soo noqday baa waxa uu yiri, “waxaan wadanaa baco oo inta aan jirkiisa cadcad u jarjarno baan cad kasta bac gooni ah ku duubaynaa.”
Ninka loo tashanayaa waa wariyihii Sucuudiga ahaa ee Jamal Khashoggi oo kaddib markii uu soo galay Qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul aan dib danbe loo arag.
Saas oo xaal yahay Arbacadii la soo dhaafay, siddeed bilood dilkii Khashoggi kabacdi, waxaa soo baxay warbixin Qaramada Midoobay oo faahfaahsan oo uu kuurgashay habkii iyo awaamiirtii suurtagalisay in wariye Jamal lagu dhex dilo oo lagu dhex jarjaro qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul. Warbixinta ayaa si aan leexleexad lahayn eedda dilka wariyaha dusha uga saartay Amiir Maxamed bin Salmaan, ayada oo warbixinta lagu gabagabeeyey in ay hayaan “caddaymo aan shaki ku jirin” oo saas muujinaya, lagamamaarmaana ka dhigaya in Amiir Maxamed bin Salmaan lala beegsado cunoqabateyn maaliyadeed iyo waliba baaritaano saa’id ah.
Khashoggi sidee loo dilay?
Aan mar kale ku noqo sida dilayaashu u maleegeen dilka Jamal Khashoggi. Warbixinta oo xiganeysa codadka ay duubeen sirdoonka Turkigu, ayaga oo qalab qarsoon adeegsanaya, darbi ha ku jiro ama meel kale ha saarnaadee, waxa ay ku bilaabaneysaa codka sarkaal Maher Mutreb oo ah sarkaal sirdoon asaga oo leh “xayawaankii aan gowrici laheyn hadduu Qunsuliyadda soo galay.”
Dhowr daqiiqo kabacdi, Khashoggi waxa uu soo galay xafiiska Qunsuliyadda si uu u helo waraaqo u sahlaya in uu si sharci ah u mehersado xaaskiisa cusub. Khashoggi waxaa loo kexeeyey dhanka xafiiska Qunsulka Guud waxaana isla markiiba loo sheegay in uu Sucuudi Carabiya ku laabanayo.
Khashoggi oo aan innaba hadalkaas iyo mid u dhow filaneyn baa wuxuu yiri, “dad baa bannaanka igu sugaya. Darawal baa i sugaya.”
Sarkaal meesha fadhiyey baa hadalkii u soo gaabiyey asaga oo yiri, “hadaltirada inta naga deyso wiilkaaga farriin u dir.”
“Wiilkee? Maxaan se u sheega wiilkeyga?” buu yiri Khashoggi.
“Farriin baad qoraysaa. Aan haddeerba biloowno oo aan ku tuso,” buu sarkaalku yiri, asaga oo ku sii daray, “Qor Jamaal. Degdeg u qor.”
Laakiin daqiiqado gudahood, sarkaalku waa khalkhalay waxa uuna la soo baxay cirbad.
Khashoggi oo cirbaddii arkay baa yiri, “oo hadda ma i sumeyneysaa?”
Sarkaalkii oo Khashoggi u jawaabaya waxa uu yiri, “maya ee waan ku suuxinayaa.”
Intaas markii la is yiri, waa lagu soo booday Jamal, kabacdina waxaa duubista laga maqlayaa buuq iyo dhaqdhaqaaq saa’id iyo neefsasho tiro badan. Wax yar kabacdina waxaa biloowday sharqanta miishaar wax jareysa.
Wixii intaas ka danbeeyey weli waa la la’yahay war sugan, waxaa se la isku raacay in sharqantaas Qunsuliyadda dhexdeeda ay ka tarjumeysay jarjarka xubnaha Jamal Khashoggi oo cadcad loo jarjaray, illaa iyo haddana meydkiisa la la’yahay.
Haddaba maxaa lagu sheegay warbixinta Qaramada Midoobey?
Warbixintu waa 101 bog waxaana diyaariyey u qaabilsanaha goonida ah ee Qaramada Midoobey dhanka dilalka sharcidarrada ah, waxaana masuul ka ahaa gabadha magaceedu yahay Agnes Callamard.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dilka Khashoggi uu ahaa mid argaggax leh, ay dowladi fulisay, lagu fuliyey amar dowlo, sidaas darteedna u baahan in la dabagalo, laguna sameeyo dambi-baaris dheeraad ah.
Warbixinta ayaa lagu dalbaday in degdeg cunoqabateyn iyo xayiraad loo saaro Amiir Maxamed bin Salman, xataa kahor inta aan maxkamad lala tiigsan si danbiga loogu xaqiijiyo ama loo caddeeyo in uusan danbiga ku lug laheyn.
Sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in ay tahay wax aan caqliga gali karin in koox ka kooban 15 sarkaal loo soo diro Qunsuliyad dowladeed ee dal kale ayada oo aan dowladdu la socon dhaqdhaqaaqooda, awaamiirna aan ka haysan madaxda dowladda ee ku sugan Riyadh.
Dhanka dowladda Turkiga, Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in warbixinta Qaramada Midoobey ay xaqiisay in Boqortooyada Sucuudigu ay ka danbeysay dilkii Jamal Khashoggi, asaga oo ku sii daray in Sucuudiga laga rabo in uu meel ku sheego meydkii Khashoggi.
“Warbixintu waxa ay xaqiijisay in Sucuudigu ogaa uuna leeyahay danbiga dilkii Khashoggi,” ayuu yiri Erdogan. Asaga oo sii wata hadalkiisana waxa uu ku daray, “waa lagala xisaabtamayaa, waana ballan in ay ka shallaayaan.”
Hoos ka dhegayso Warbixinta.
Turkiga: “Dilkii Khashoggi waxaan u haynnaa caddaymo maqal iyo muuqaal oo naxdin iyo murugo leh”
Xeer-ilaalinta Qaranka oo Muqdisho ku qabatay Kulan looga hadlayay dhaqan gelinta Xaashida Dhaawac muujinta